Uzulu weZimbabwe wehlukene ngemibino phezu kwesimemezelo sikahulumende sokuthi izinduna zeMatabeleland yizo ezizakhokhela uhlelo lokugejwa lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngumbhuqazwe weGukurahundi.
Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo uMnu July Moyo utshele intathelizindaba ukuthi lokhu yikho okuvunyelwane phakathi kukaMongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna lezi emhlanganweni abawenzele koBulawayo ngoMgqibelo.
Wengeze wathi bakubone kufanele ukuthi izinduna zikhokhele loluhlelo ngoba kuyizo ezazi amasiko lemikhuba yokuphatha umsebenzi onje.
Kodwa abanye bayakusola lokhu besithi uhulumende kumele axolise kuzulu weMidlands leMatabeleland ngokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili, 20,000, libutho leFifth Brigade njalo ahlawule abantu abaphathwa kubi yilumbhuqazwe.
Owake waba ngukhansila kaWard 16 koDakamela, eNkayi uMnu Jabulani Manqonda utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ufuna labo abenza ubudlova lobu babotshwe kuqala.
Ingxoxo loMnu Jabulani Manqonda
Kodwa bakhona abalusekelayo loluhlelo abathi izinduna yizo kanye ezimele zilukhokhele ngoba kuyizo eziphethe amasiko okungcwatshwa kwabantu ezigabeni. Omunye wabo lilunga leZanu PF uMnu Believe Gaule.